Ny horonantsary manontolo an'ny keynote an'i Apple dia eo amin'ny fantsona YouTube-ny Avy amin'ny mac aho
Ny horonantsary manontolo an'ny keynote an'i Apple dia eo amin'ny fantsonao YouTube izao
Apple dia efa manana ny teny fototra ao amin'ny fantsona YouTube ofisialiny notontosaina ny alatsinainy 13 jona lasa teo, tao anatin'ny rafitry ny WWDC. Amin'ity fehezanteny fototra ity alohan'ny fialantsasatry ny fahavaratra dia nahita vaovao marobe avy amin'ny OS isan-karazany izy ireo. Apple dia mikasa ny hanao mivantana mivantana ny zava-mitranga rehetra mandritra ny taona vitsivitsy (talohan'ny naha-tsy izy rehetra) fa tsy midika izany fa ny mpanaraka na ny mpampiasa ny orinasa dia afaka mahita azy mivantana na te hahita azy io indray, noho izany antony izany andro vitsy lasa izay dia nahanton'izy ireo tao amin'ny fantsona ofisialin'ny tambajotra sosialy.
Ity no horonantsary feno an'ny keynote nanehoan'i Apple ny inona no vaovao ao amin'ny macOS Sierra, iOS 10, watchOS, ary tvOS:
Tamin'ity herinandro ity dia nahita horonantsary navoakan'ny mpanelanelana MacRumors izahay a Famintinana 7 minitra miaraka amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny fihaonambe Apple nandritra ny adiny roa. Ao amin'ny horonan-tsary dia ampahafantarin'izy ireo anay ny fisongadinana rehetra saingy ny fahitana ny zava-drehetra indray dia safidy hafa hodinihina ary azo atao izao avy amin'ny fantson'ny Apple. Ny marina dia misy mpampiasa manontany antsika hoe aiza no ahitan'izy ireo ny teny ifotony iray andro vitsivitsy aorian'ny fankalazana izany ary azony ampiasaina amin'ny fantsona YouTube na koa amin'ny tranokala Apple manan-danja. Ny roa mihoatra ny roa ora faharetan'ny fehezan-teny ho an'ny volana Jona izao dia azo jerena arakaraka ny tinady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Ny horonantsary manontolo an'ny keynote an'i Apple dia eo amin'ny fantsonao YouTube izao
Fampiroboroboana ny fividianana headphone ho an'ny mpianatra Hits Europe